सन्दर्भ प्रणय दिबस : यी नेताहरु जसको हालसम्म बिहे भएको छैन, किन खोजेनन् जीवनसाथी ?::Pathivara News
सन्दर्भ प्रणय दिबस : यी नेताहरु जसको हालसम्म बिहे भएको छैन, किन खोजेनन् जीवनसाथी ?
काठमाडौँ । आज प्रणय दिबस । अविवाहित जोडि नयाँ जोडीको खोजीमा छ भने विवाहित जोेडि भ्यालेनटाइनको दिन माया साट्ने तथा घुमघाम गर्न व्यस्त छन् । भ्यालेनटाइनमै प्रेम गरेर नयाँ जीवनको सुरुवात गर्ने धेरैको चाहाना छ । तर नेपालमा यस्ता नेताहरु छन् जसले उमेरले नेटो काटेपनि विवाह गरेका छैनन् । तिनिहरुमा अग्रपंकितामा एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाले पोलिटब्युरो सदस्यद्वय शेरधन राई र बिन्दा पाण्डे, नेतृहरू जयन्ती राई, गरिमा साह, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल, रामहरि खतिवडा, सीता गुरुङ, फर्मुल्लाह मन्सुर, माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल छन् ।
त्यस्तै, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अम्बिका बस्नेत, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ, केशव सिंह, महेन्द्र शर्मा, पूर्वराज्यमन्त्री रामहरि ढुंगेल, एमाले केन्द्रीय सदस्य ममता गिरी पनि अविवाहित नेताको सूचीमै पर्छन् । ‘पारिवारिक झमेला’ झेल्नुनपरे पनि यी नेताहरूले ‘पारिवारिक सुख’ पनि भोग गर्न पाएका छैनन् ।
केही नेताहरूको विवाह नहुनुका पछाडि रोचक प्रसंग पनि छन् । कतिपय त बिहे गर्न तम्तयार भएर पनि पछि हटे ।
तिनैमध्येका एक हुन्, माओवादी केन्द्का उपाध्यक्ष श्रेष्ठ । १७ वर्षको उमेरमै उनी बिहे गर्ने तयारीमा थिए, तर पछि भएन । त्यतिबेला उनी कसैको प्रेममा थिए । ‘ १७ वर्षको हुँदा विवाह गर्नुपर्छ कि जस्तो भयो, तर भएन,’ श्रेष्ठले एक अन्तरवार्तामा भनेका थिए ।
कुनै समय नेता श्रेष्ठलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीताले ‘बाबु, बिहे त गर्नै पर्योत नि’ भनेर सम्झाउँथिन् । प्रचण्ड पनि घच्घच्याउँथे, ‘बिहे गर्ने होइन भन्या’ भनेर ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य जयन्ती राईले एकपटक बुबाले टुंगो लगाइदिएको बिहे खारेज नै गरिदिइन् । दुईपटक पार्टीले गरेको विवाह प्रस्तावलाई पनि लत्याइन् । तर, दबाब आउने क्रम अझै जारी छ । ‘एकपटक घरमा आएर कसैले मलाई बुबासँग मागिसकेछ, मैले क्यान्सिल गरिदिएँ,’ राईले सुनाइन्, ‘बिहे गर्नुपर्ला भन्ने सोच कहिल्यै दिमागमा आएन ।’ बुढेसकालमा ‘छोराछोरीले हेर्छन्’ भन्ने सामाजिक मान्यतामा नेतृ राईलाई विश्वास छैन ।
एमाओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल आफैँलाई थाहा छैन, विवाह किन भएन भन्ने । विवाहलाई आफूले प्राथमिकतामा नराखेको उनी बताउँछन् । ‘बिहे कसरी भएन मलाई पनि थाहा छैन । आन्दोलनसँग गाँसिएको जीवनमा कुनै बेलामा विवाह गर्न तयार नहुने, कुनै बेला गर्ने पो हो कि भन्ने पनि लाग्ने,’ उनी भन्छन्, आन्दोलन र कामको बीचमा विवाह प्राथमिकताको माथिल्लो सूचीमा परेन ।’
पोखरेल मन्त्री हुँदा अरू मन्त्री र नेताहरूले ‘विवाह गर्नुपर्यो, केटी खोजिदिउँ’ भन्थे । केही युवा नेताहरू अहिले पनि उनलाई ‘विवाह गर्नुपर्यो ’ भन्छन् । ८८ वर्षका बुबाले पनि बेलाबेला ‘बिहे गरे हुन्थ्यो’ भन्ने खबर पठाउँछन् । तर, पोखरेल भने अझै दोमनमै छन् । ‘जतिखेर विवाह गर्ने कि भन्ने मनस्थिति बनाइयो, त्यो वेलामा विवाह भएन, भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले कसरी भन्नु ? उनले एएटा अन्तरवार्तामा भएका थिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले ‘अहिलेसम्म बिहे नगरेर ठीकै गरेको’ ठानेका छन् । वैवाहिक झन्झटमा नअल्झिँदा पार्टी र साथीभाइलाई समय दिन सकेको उनी बताउँछन् । ‘बिहे नगरेर मलाई घाटा भएको छैन, पारिवारिक जिम्मेवारी छैन, फुक्का भएर हिँडिन्छ । श्रीमतीलाई सघाउने, बालबच्चा स्कुल पुर्याउने झन्झट छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सबै समय राजनीतिमा खर्चिन पाएको छु, साथीहरूलाई पर्याप्त टाइम दिन पाएको छु ।’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा पनि भने अब बिहे गर्ने विष्कर्षमा पुगेका छन् । बिहे नगरेर सुखभन्दा दुख बढी पाएको उनले महसुस गरेका छन् । अविवाहित हुँदा घरमा सबै सामान लथालिंग हुने गरेको खतिवडाले बताए । ‘बेलुकी घर जाँदा आइपुग्नुभयो भन्ने मान्छे छैन, कहिले जुत्ता मिलेको हुँदैन, कहिले कपडा मिलेको हुँदैन, घरमा साथीहरू आए सीधै ओछ्यानमा पुग्छन्,’ उनले विवाह नगर्दा झेल्नुपरेका कठिनाइ सुनाए, ‘गाउँबाट साथीहरू साँझ–बिहान आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई खाना, चिया खुवाउन पाइँदैन, कहिलेकाहीँ बिरामी पर्दा हेरविचार गर्ने हुँदैनन् ।’ वैवाहिक बन्धनमा नबाँधिदा केही कुरामा सजिलो पनि भएको नेता खतिवडाले बताए । ‘कतिखेर घर आउने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपरेको छैन, कचकच सुन्नुपरेको छैन,’ उनी भन्छन् ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् ममता गिरी विवाह नगरेर ठीक गरेको बताउँछिन् । ‘विवाह गरेको भए म पारिवारिक झमेलमा अल्झन सक्थेँ, अहिले मैले सबै समय देश र जनताका लागि खर्चन पाएकी छु, यसमा सन्तुष्ट छु,’ उनी भन्छिन् । बिहे नगर्ने निष्कर्षमा उनी पुगेकी छिन् ।
‘विवाह गरुँ भन्ने लागेको भए बिहे गरिहाल्थेँ नि,’ उनले भनिन्, ‘पहिले–पहिले घरपरिवार, साथीहरूले विवाह गर्नुपर्यो‘ भनेर दबाब दिनुहुन्थ्यो, अहिले त कुनै दबाब पनि छैन,’ गिरीले भनिन् । प्रेम–प्रस्ताव भने धेरै आएको उनले बताइन् । ‘मैले धेरैका प्रेम–प्रस्ताव अस्वीकार गरेँ, मैले त कसैलाई प्रस्ताव राखिनँ,’ उनले भनिन् ।